Ya mere, ụmụnna m, ebe unu maara na unu ga-emeri nꞌikpeazụ, guzosienụ ike nꞌokwukwe unu. Bụrụnụ ndị guzo chịm, ndị nọgidesịrị ike na-arụ ọrụ Onyenwe anyị, nꞌihi na unu maara na ọ dịghị ọrụ ọ bụla unu rụụrụ Onyenwe anyị bụ ihe efu, ebe ha ga-adị mgbe anyị bilitere nꞌọnwụ.
Eji m aka na unu na-ahụ ugbu a, na achọghị m isite nꞌokwu ire ụtọ, mee ka unu nabata m, kama ihe m chọrọ bụ nanị ime ihe ga-atọ Chineke ụtọ. Nꞌihi na a sị na m chọrọ ime ihe ga-atọ ndị mmadụ ụtọ, agaraghị m abụ onye na-ejere Kraịst ozi.
 Ọ bụrụ na ị na-eche nꞌobi gị na ị nweghị ike ime ihe ndị a, leziekwa onwe gị anya, nꞌihi na ị pụrụ ịdabakwa na mmehie. Ma matakwa nke ọma na ọnwụnwa na-abịara gị adịghị iche site nꞌọnwụwa na-adakwasị ndị ọzọ. Ọ dịkwaghị ọnwụnwa mmadụ na-enweghị ike imeri. Ọ bụrụ na ị tụkwasị Chineke obi, ọ ga-enye gị ike iguzosi ike nꞌoge ọnwụnwa, zikwa gị ụzọ ị ga-esi merie ọnwụnwa ọ bụla. Nꞌihi na Chineke agaghị ekwe ka ọnwụnwa ọ bụla ka gị ike dakwasị gị.
 “Unu akpadola akụ nꞌụwa nꞌihi na akụ a kpadoro nꞌụwa a pụrụ ịta ajarị, nla pụrụ iri ha, ndị ohi pụkwara izu ha. Kama cheenụ akụ unu nꞌeluigwe, ebe ha na-agaghị ata ajarị, ebe nla na-agaghị eri ha, ebe ọ na-adịkwaghị onye ga-ezu ha. Nꞌihi na ebe ọ bụla akụ unu dị ka obi unu ga-adịkwa.
 Timoti, gị onwe gị bụ onye nke Chineke, gbanarị ihe ọjọọ ndị a nile, ma rụsie ọrụ ike ịgbaso ezi omume na ihe dị mma. Mụta ịtụkwasị Chineke obi na ịhụ ndị ọzọ nꞌanya, na inwe ogologo ntachi obi na ịdị nwayọọ. Gbasie ọsọ ọma nke okwukwe gị ike. Jidesiekwa ndụ ebighị ebi ahụ Chineke nyere gị aka ike. Ndụ ebighị ebi ahụ i nwere, nke i kwupụtakwara ihe banyere ya nꞌihu ọtụtụ ndị ama.
 Nọọnụ na njikere, na-echekwanụ nche nꞌihi na onye iro unu bụ ekwensu ji oke ịgbọ ụja na-awagharị dị ka ọdụm agụụ na-agụ na-achọ onye ọ ga-ala nꞌiyi. Guzosienụ ike nꞌokwukwe unu mgbe ọ ga-alụso unu ọgụ. Unu ekwela ka o merie unu, kama tụkwasịnụ Onyenwe anyị obi. Chetanụ na e nwere ọtụtụ ndị kwere ekwe dị ka unu ndị nọkwa nꞌụdị ahụhụ a unu na-ahụ nꞌụwa nile.
 Ma nꞌetiti onwe unu ọ gaghị esi otu a dịrị. Kama ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ ịbụ onye ukwu, ọ ga-ebu ụzọ bụrụ onye na-ejere unu ozi. Onye ọ bụla kwa chọrọ ịbụ onye dị ukwuu karịa unu nile, kwesịrị ịbụ onye na-ejere onye ọ bụla nꞌime unu ozi. Nꞌihi na mụ onwe m, Nwa nke mmadụ, abịaghị nꞌụwa ka ndị mmadụ jeere m ozi. Kama abịara m ijere ndị mmadụ ozi, na inye ndụ m ka ọ bụrụ ihe a ga-eji gbapụta ọtụtụ mmadụ.”